यी नायिकाहरु मध्ये तपाईको नजरमा को राम्रो ? हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस ! « हाम्रो ईकोनोमी
यी नायिकाहरु मध्ये तपाईको नजरमा को राम्रो ? हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस !
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहिले नायिकाहरुको निकै प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । हुन त कुनैपनि नायिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धा अरुसँग भएको बताउँदैनन् । तर दर्शकले नै प्रतिस्पर्धाको भावना जगाइदिन्छन् । अहिले चर्चाको शिखरमा केही नायिकाहरु छन् जो निकै व्यस्त र डिमाण्डेड नायिकाहरु हुन् ।अहिले नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई नम्बर वान नायिकाको ट्याग दिइएको छ । उनी एकपछि अर्को चलचित्रमा निकै व्यस्त छिन् । उनले पारिश्रमिक कति लिन्छिन् भन्ने कुरा भने कसैलाई पनि थाहा हुदैन र उनी बताउन पनि चाहन्नन् ।
यस्तै बर्षा राउतको चर्चा चलचित्र जात्रै जात्रा को सफलताले निकै बढाएको छ । उनको डिमाण्ड पनि बढ्न थालेको छ । तर उनी तत्काल चलचित्र गर्ने मुडमा भने छैनन् । नायिका पूजा शर्मा अहिलेकी सर्वाधिक व्यस्त र चर्चित नायिका हुन् । उनले एउटा चलचित्रबाट २० लाख सम्म पारिश्रमिक लिने गरेको चर्चा बजारमा छ । उनको फ्यान फलोइङ पनि निकै लोभलाग्दो रहेको छ ।
साम्राज्ञीलाई अहिलेकी सबैभन्दा महंगी अभिनेत्रीको रुपमा हेरिन्छ । युवापुस्तामा उनको क्रेज निकै रहेको छ । आँचल शर्मा सबैकी प्रिय नायिका हुन् । अभिनयबाट खासै वाहवाही नपाएपनि आँचलको स्टारडम भने घटेको छैन । उनीपनि एकपछि अर्को चलचित्रमा व्यस्त छिन् । प्रियंका कार्की सदावहार चर्चामा रहने नायिका हुन् । पछिल्ला दिनहरुमा उनी म्यूजिक भिडियोमा बढी देखिन थालेकी छिन् । यी नायिकाहरुमा को भन्दा को उत्कृष्ट भन्ने कुराले चर्चा पाइरहेको हुन्छ ।